A MacBook Pro wuxuu la xanuunsanayaa gubashada Samsung Galaxy Note 7 iyadoo la maleynayo iyada oo aan lagu guuldareysan | Waxaan ka socdaa mac
Waqtigan xaadirka ah uma maleynayo inay muhiim tahay in laga faaloodo "dhibaatada yar" ee Samsung South Korea Samsung ay soo martay oo leh Galaxy Note 7 cusub, laakiin kuwa maalmahan ama bilooyinkan warku soo ifbaxay soo ogaan waayey, waxaa lagu soo koobi karaa in batteriga sabuurada cusub ee Samsung adoo leh iskutallaab u dhexeysa anode iyo cathode. Isgoyskan, oo dhibaato ku ah soo saarista batteriga laftiisa, ayaa sababa aaladda inay aad u kululaato oo dab shidan karto, sidaas darteed Samsung lafteeda ayaa go’aansatay inay la baxdo dhammaan qalabkii ay ku iibin jirtay iyo kuwa isticmaala. mar hore Waxay ku haysteen gurigooda si loogu beddelo mid cusub, laakiin waxay u muuqataa in qaabka beddelka uusan lahayn dhibaatada la xalliyey sidoo kale MacBook Pro ee aan ku aragno sawirka ayaa la kulmay cawaaqib xumada.
Shaki la'aan dhibaatadu waa mid culus tan iyo aaladaha Samsung Iyagu waa IP68 shahaado sidaa darteed iyagu waa biyo deggan iyo markaad biyaha ku dhex shubayso dhibka waxaa ku batay isgoyska. Waqtigaan la joogo, waxa aan ku cadeynay ayaa ah in jiilka cusub ee fallaagooyinka ay umuuqdaan inay leeyihiin dhibaato lamid ah tan MacBook Pro-na ay la kulantay cawaaqibka. Waa unug dhawaan iibsaday isticmaaluhu isla markaana loo haystay inuu ka xor yahay dhibaatada batteriga laakiin waxay umuuqataa inaysan kiiska ahayn.
Waxa ugu fiican ee waxaas oo dhan ku saabsan ayaa ah in milkiilaha uusan soo gaarin dhaawac shaqsiyeed waana hubaal in Kuuriyada Koofureed ay tahay inuu daryeelo waxyeelada maadiga ah ee ka soo gaadhay qalabka moobiilka iyo kan quruxda badan ee MacBook Pro ee isna la waxyeeleeyay. Waan arki doonnaa sida waxaas oo dhami u dhammaadaan laakiin uma muuqdaan kuwo aad u wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » MacBook Pro wuxuu ku dhacaa gubashada Samsung Galaxy Note 7 iyadoo loo maleynayo inuu ku guuldareysto
Taasi waxay dhacdaa markaad ku xirto qalab Samsung ah aaladda Apple. Waa isdifaacida qashinka.